30 Rakeri paakaona kuti hapana chaakanga aberekera Jakobho, Rakeri akaitira mukoma wake godo, akatanga kuti kuna Jakobho:+ “Ndipe vana, kana zvikasadaro ndichava mukadzi akafa.”+ 2 Jakobho akatsamwira Rakeri kwazvo akati:+ “Ndiri panzvimbo yaMwari here, uyo akunyima chibereko chedumbu?”+ 3 Naizvozvo akati: “Hoyu murandasikana wangu Bhiriha.+ Rara naye, kuti asunungukire pamabvi angu uye kuti ini, iyeni, ndiwane vana kwaari.”+ 4 Naizvozvo akamupa Bhiriha mushandikadzi wake kuti ave mudzimai wake, Jakobho akarara naye.+ 5 Bhiriha akava nepamuviri uye kwapera nguva yakati akaberekera Jakobho mwanakomana.+ 6 Rakeri akabva ati: “Mwari ava mutongi+ wangu uye ateererawo inzwi rangu, zvokuti andipa mwanakomana.” Ndokusaka akamutumidza kuti Dhani.+ 7 Bhiriha, mushandikadzi waRakeri, akavazve nepamuviri uye kwapera nguva yakati akaberekera Jakobho mwanakomana wechipiri. 8 Rakeri akabva ati: “Ndaita mutsimba kwazvo nomukoma wangu. Ndakundawo!” Naizvozvo akamutumidza kuti Naftari.+ 9 Reya paakaona kuti akanga aguma kubereka, akatora Ziripa mushandikadzi wake akamupa Jakobho kuti ave mudzimai wake.+ 10 Kwapera nguva yakati Ziripa, mushandikadzi waReya, akaberekera Jakobho mwanakomana. 11 Reya akabva ati: “Makorokoto!” Naizvozvo akamutumidza kuti Gadhi.+ 12 Ziripa, mushandikadzi waReya, akazoberekera Jakobho mwanakomana wechipiri. 13 Reya akabva ati: “Mufaro wakadini! Nokuti vanasikana vachanditi ndinofara.”+ Naizvozvo akamutumidza kuti Asheri.+ 14 Zvino Rubheni+ akafamba pamazuva okukohwa+ gorosi akawana mamandireki kusango. Naizvozvo akauya nawo kuna Reya amai vake. Rakeri akabva ati kuna Reya: “Ndapota, ndipewo mamwe mamandireki+ omwanakomana wako.” 15 Iye akati kwaari: “Ichi chinhu chiduku here, kutora kwawakaita murume wangu,+ zvino wotorawo mamandireki omwanakomana wangu?” Naizvozvo Rakeri akati: “Nokuda kwaizvozvo acharara newe usiku huno nokuda kwemamandireki omwanakomana wako.” 16 Jakobho paakanga achibva kumafuro manheru,+ Reya akabuda kunomuchingura akabva ati: “Ucharara neni, nokuti ndakutenga zvakananga nemamandireki omwanakomana wangu.” Naizvozvo akarara naye usiku ihwohwo.+ 17 Zvino Mwari akanzwa, akapindura Reya, akava nepamuviri uye kwapera nguva yakati akaberekera Jakobho mwanakomana wechishanu.+ 18 Reya akabva ati: “Mwari andipa mubayiro womunhu akatengwa, nokuti ndakapa murume wangu mushandikadzi wangu.” Naizvozvo akamutumidza kuti Isakari.+ 19 Reya akavazve nepamuviri uye kwapera nguva yakati akaberekera Jakobho mwanakomana wechitanhatu.+ 20 Reya akabva ati: “Mwari andipa chipo, chokwadi andipa chipo chakanaka. Murume wangu achazondishivirira,+ nokuti ndamuberekera vanakomana vatanhatu.”+ Naizvozvo akamutumidza kuti Zebhuruni.+ 21 Akazobereka mwanasikana akabva amutumidza kuti Dhina.+ 22 Mwari akazoyeuka Rakeri, Mwari akamunzwa akamupindura pakuti akavhura chibereko chake.+ 23 Akava nepamuviri, akabereka mwanakomana. Akabva ati: “Mwari abvisa kuzvidzwa kwangu!”+ 24 Naizvozvo akamutumidza kuti Josefa,+ achiti: “Jehovha ari kundiwedzera mumwe mwanakomana.” 25 Zvino kuzoti Rakeri abereka Josefa, Jakobho akabva ati kuna Rabhani: “Ndiregei ndiende kunzvimbo yangu nokunyika yangu.+ 26 Ndipei madzimai angu nevana vangu, vandakakushandirai, kuti ndiende; nokuti imi munoziva basa rangu randakakuitirai.”+ 27 Rabhani akabva ati kwaari: “Zvino, kana wandinzwira nyasha,—ndaona nemanenji kuti Jehovha ari kundikomborera nokuda kwako.”+ 28 Akatizve: “Nditemere mubayiro wako uye ndichakupa.”+ 29 Naizvozvo akati kwaari: “Imi munoziva kukushandirai kwandakaita, kuti boka renyu rezvipfuwo rakagara sei neni;+ 30 kuti makanga mune zvishoma ndisati ndauya, uye zvakatanga kuwedzera kuva zvizhinji, pakuti Jehovha akakukomborerai kubvira pandakasvika.+ Zvino ndichaitirawo imba yangu chimwe chinhu riniko?”+ 31 Akabva ati: “Ndichakupei?” Jakobho akati: “Hapana chamuchandipa nyange zvodini!+ Kana mukandiitira chinhu ichi, ndichatangazve kufudza boka renyu rezvipfuwo.+ Ndicharamba ndichirichengetedza.+ 32 Ndichapfuura nepakati peboka renyu rezvipfuwo rose nhasi. Tsaurai ipapo makwai ose ane makamba makamba neane mavara, uye makwai mashava ose pakati pemakondohwe maduku uye pakati penhunzvi dzembudzi dzose dzine mavara nedzine makamba makamba. Pashure paizvozvo idzodzo dzichava mubayiro wangu.+ 33 Kuita kwangu zvakarurama kuchandipindurira pazuva ripi neripi riri mberi ramungauya kuzotarira mubayiro wangu;+ pakati penhunzvi dzose dzisina makamba makamba nedzisina mavara uye chinhu chose chiri pakati pemakondohwe maduku asiri mashava chinhu chakabiwa kana chineni.”+ 34 Rabhani akati: “Chokwadi, zvakanaka! Ngazvive sezvawataura.”+ 35 Pazuva iroro akabva atsaura nhongo dzine mitsetse nedzine mavara nenhunzvi dzose dzembudzi dzine makamba makamba nedzine mavara, uye pamakondohwe maduku akatsaura ose akanga ane pakachena neose aiva mashava, asi akazviisa mumaoko evanakomana vake. 36 Pashure paizvozvo akaisa chinhambwe chorwendo rwemazuva matatu pakati pake naJakobho, uye Jakobho akanga achifudza mapoka ezvipfuwo aRabhani akasara. 37 Jakobho akabva atora matanda maduku omustorakisi+ achiri manyoro okuti ashandise neomuarumondi+ neomupurani+ akasvuura paari makamba machena nokusiya nzvimbo chena dzisina chinhu dzaiva pamatanda maduku.+ 38 Akazoisa matanda maduku aakanga asvuura pamberi peboka rezvipfuwo, maiiswa mvura, muzvinwiro,+ umo mapoka ezvipfuwo aiuya kuzonwira, kuti anzwe kuda mukono ari pamberi pawo paaiuya kuzonwa. 39 Naizvozvo mapoka ezvipfuwo ainzwa kuda mukono ari pamberi pematanda maduku, uye mapoka ezvipfuwo aibereka zvine mitsetse, zvine makamba makamba nezvine mavara.+ 40 Jakobho akatsaura makondohwe maduku, akataridzisa mapoka ezvipfuwo kune zvine mitsetse nezvishava zvose pakati pemapoka ezvipfuwo aRabhani. Akabva aisa mapoka ake ezvipfuwo ari oga uye haana kuaisa pamwe chete nemapoka aRabhani. 41 Zvaigaroitika kuti pose apo mapoka ezvipfuwo akasimba+ ainzwa kuda mukono, Jakobho aiisa matanda maduku maiiswa mvura+ pamberi pemaziso emapoka ezvipfuwo, kuti anzwe kuda mukono ari pedyo nematanda. 42 Asi mapoka ezvipfuwo paairatidza kuti akanga asina kusimba aisaaisa ipapo. Naizvozvo asina kusimba aigarova aRabhani, asi akasimba aJakobho.+ 43 Zvino murume wacho akaramba achingowedzera, akava nemapoka makuru ezvipfuwo nevashandikadzi nevashandirume nengamera nembongoro.+